Petersburg - hhayi elikhulu kakhulu, kodwa ngempela umuzi omuhle, okuyinto 450 nje km kusukela dolobha yaseRussia. Fika lapho, kufanele uvakashele izindawo ezinhle kakhulu hhayi kuphela, kodwa futhi kwezinye izindawo lapho kukhona odumile kuleli dolobha. Kungaba ezihlukahlukene amathilomu, izindawo zokudla, libhala, kuma-nightclub, amapaki amanzi, yeshashalazi, Philharmonic, nokunye.
Indawo yokudlela "Vereshchagin" (Vologda) ingaphezu indawo ezithakazelisayo, lapho izivakashi zijabulela ukudla okumnandi ngamanani akhokhelekayo. Ngaphezu kwalokho, lapha awukwazi ukujabulela kuphela ukudla, kodwa futhi sifunde ngokuphila umuntu njengami Vereschagin Nikolay vasilevich. Uyazi yini ukuthi igama? Khona-ke ake kunalokho ukukhuluma Setemfundvo, ethiwa behlonipha lo muntu omkhulu.
Njengoba wazi, lokhu cafe yethiwa umuntu odumile e Vologda. Nokho, lokhu akukhona ulwazi olunembile ngokuphelele, ngoba, ngokusho Abadali lesikhungo, banquma igama yokudlela akuyona kuphela ngenxa Vereshchagin uNikolai bani bonke obizwa ngokuthi uyise Vologda ibhotela, kodwa futhi umfowabo Basil, wayelithanda imidwebo. Phela, lo yokugcina liyaziwa amaphethini yayo nenhle in Russia, India, kanye Old and New World.
Yini aphefumulelwe ukudala le yokudlela, ngoba kunabantu ephumelela kangcono emlandweni? Yiqiniso, isizathu kwaba uthando lweqiniso Vereschagins eRussia Vologda kufakwe!
Indawo yokudlela "Vereshchagin" (Vologda) iyona zemicimbi ethandwa kakhulu lapho ungazama izitsha zokudala zokupheka zakudala. Kuyinto isikhungo kwi waseHerzen emgwaqweni (2a indlu), futhi livulekele nsuku zonke, kodwa hhayi ubusuku nemini kusukela 12 ntambama kuya phakathi kwamabili.
Njengoba for ekhishini, lapha kuyafaneleka yokuthi imenyu kuhlanganisa izitsha abahlanganisa abeLungu, Uzbek, cuisine isiRashiya Italy. Ngaphezu kwalokho, kukhona iyatholakala imenyu ehlobo iyatholakala 3 kuphela izinyanga.
Indawo yokudlela "Vereshchagin" (Vologda), ikheli unikezwa ethe xaxa, umema izivakashi wokuhlela yimuphi umsebenzi nangumuntu. Lapha ungaba lokuzalwa ezinhle, imishado, izenzakalo yebhizinisi nezinye izenzakalo eziningi, kanye nje usuku. Ujabula ngayo yonke into ngeke wena kuphela kodwa futhi izingane zakho, uma unquma uthathe kubo nawe!
Uma ufuna ukuthatha umhlalaphansi ku inkampani encane noma ukuba yedwa, ubheke isikhonzi futhi uhlole naye ukuthi kukhona kungenzeka ukuba kwenzeke classical Igumbi VIP. Nokho, ibhonasi nice kulabo ufuna ukuvakashela yokudlela "Vereschagin" (Russia, Vologda), kuyoba kokuba yokupaka ayo, ngakho ungakwazi ukuza ngemoto yakho siqu futhi ungakhathazeki mayelana nokuthi konke ukuze nge imoto yakho.
Ukudla zinikezwa kwimenyu enkulu, qiniseka ukujabulisa wonke ulwanga. Lapho, uyothola, kanye nesikhundla elula ngamanani aphansi, kanye izitsha of nobunzima aphakathi, ngisho izitsha, ukulungiswa okungathatha i chef abanolwazi isikhathi esingaphezu kwehora.
Indawo yokudlela imenyu "Vereshchagin" Vologda ngeke ukujabulisa bonke abantu. Ungazama ezihlukahlukene izitsha isiqondiso ehluke ngokuphelele, ezifana nokudla yasendle nge ubhontshisi kanye omelet angadle ngabuhle obutheni; amadombolo ezazigxishwe inyama noma Pike bear; Lasekuqaleni Onion Soup, phakathi izithako main zazo abelwe isikhuphashe.
"Vereschagin" - yokudlela Vologda (esiyingqayizivele), lapho ungakwazi ukunambitha izitsha ezibalwe ngenhla. By endleleni, kukhona Ukukhetha eziningi iwayini, futhi imenyu cocktail ezahlukene (kokubili zakudala ngokuphelele yasekuqaleni). Ufuna ukuzama ikhofi gourmet? Ayikho inkinga! Udinga lemonade, itiye noma fresh? Konke kuzokwenziwa!
Amahora okuvula Indawo yokudlela "Vereschagin" has, njengoba wazi, ngempela ukhululekile (ohlwini ekuqaleni isihloko). Ngasinye ngosuku olulodwa, bese cafe kwenza njalo ukusingatha noma yimuphi umcimbi. Ngakho, ukugujwa kwezinsuku namaholide lapha ivamile, kodwa kunalokho okuphambene - njalo kakhulu.
Ngakho, yini okwenza umuntu ephelele uphawu umcimbi? Yiqiniso, kungcono umculo, okungcono ephilayo, okumnandi, iziphuzo yasekuqaleni futhi ajabule. Amaphuzu okuqala amathathu aqinisekisiwe, kodwa khona ajabule akuxhomekile ekuphathweni, nakuba kuyafaneleka ukuthi abasebenzi njalo ngizama ukwenza konke okusemandleni ukuze ube iklayenti uzizwa ukhululekile.
Ngaphezu kwalokho, ukubaluleka silinganisiwe idili kwenye umuntu emhlabeni 1 ayizinkulungwane. Ruble. It ngempela inombolo encane ngoba amanani eMoscow.
Master amakilasi kusuka labapheki professional akukhona okungavamile ukuba likhithike endaweni enjalo, njengendawo yokudlela "Vereschagin" e Vologda (indlela yokusungulwa, ngasendleleni, sesivele okukhulunywe ngaye ekuqaleni). Uma ufuna ukuzama wena ubuciko Culinary, qiniseka ukuba beze izifundo njalo kulungiselelwa okuhlukahlukene. Kungani akakwazi ukwamukela amakhono yangempela Culinary abe inkosi enekhono ukupheka ukujabulisa izitsha okumnandi kakhulu hhayi wona kodwa futhi nokusindisa abanye?
Funda ukubamba iyiphi workshop esikhathini esizayo esiseduze kungaba inombolo yocingo 8 (8172) 75-87-78 (le nombolo Ungase futhi eceleni itafula noma ucele abaphathi mayelana nokwenzeka ukufezeka idili). Ulwazi oluzayo ukupheka amakilasi njalo olusha phezu olusemthethweni indawo cafe.
Indawo yokudlela "Vereshchagin" (Vologda) inikeza oda zikuyise ibhizinisi kanye sokudla. Lesi sidlo esibanzi ilungele abasebenzi amahhovisi aseduze noma izinkampani. Izindleko lezi ziphakamiso zokhahlamba kusuka ruble ngayinye 1 share 300.
Ukudla neziphuzo enikeziwe kwimenyu enkulu abasakwazi yokuqala, esihlwabusayo futhi zihlukahlukene. Kulokhu kweSikole imikhiqizo lomuzi lwakubo, ngakho ungakwazi ukujabulela amakhowe zendawo zifakwe emanzini anosawoti, ngabhema fish, lesinkwa esisanda kubhakwa nokuningi.
Ngakho, imenyu siqukethe le izigaba ezilandelayo:
"Isidlo Izintandokazi Vereshchagin";
"Izitsha Izintandokazi kusukela kwethulwa Vereshchagin";
"Izidlo okulungiselelwe kusukela inyama";
"Zogwadule yokudlela yabo iqoqo";
"Uhlu Bar" kuhlanganisa izigatshana ezifana:
"Cognac" Ararati ";
Ngincoma uzama amakhasimende?
Kusukela esigabeni, okuyinto kuveza Ungadla ozithandayo Vereshchagin, izivakashi yokudlela Kunconywa ukubhuka izinhlanzi assorted ebhema ruble 390, kanye amazambane pancake ne Roe Pike, red anyanisi, rasp ngibhema, ukhilimu omuncu kanye namakhambi ukuze ruble 260. Ngaphezu kwalokho, futhi kufanele sizame le herring nge amazambane nemifino (ruble 190.), Fritters of zucchini abasha ukhilimu omuncu futhi caviar (ruble 180.), Chicken amaphiko (ruble 245.), Ikhaya aspic ezintathu izinhlobo inyama (ruble 280 .) pate izingulube kanye amaphiva inyama nge cranberry sauce (ruble 280.), mini-pasties efakwe ushizi okuzenzela kanti utamatisi kanye sauce garlic (ruble 220.) futhi ubhekeni (ruble 320).
inani elikhulu izitsha okwethulwa kulesi sigaba imenyu ngamanani enengqondo, kodwa akukho umuzwa kubala bonke. Ngakho, iningi Izibuyekezo akhayo izitsha ezifana:
isaladi ukukhanya ushizi othambile, uphayini nati strawberry (ruble 280);
isaladi "Pescador" nezimfanzi okuphekiwe, squid, izimbaza, ama-chips, cherry utamatisi (ruble 420.);
salmon isaladi nge ukhilimu zaseFrench iresiphi sauce (ruble 380);
"Olivier" nge isikhuphashe (260 deda.);
'UKhesari' nge inkukhu (245 ruble);
isaladi ka inyama yenkonyana futhi chanterelles (ruble 370).
Zogwadule futhi izibuyekezo zezivakashi
tiramisu Classic izobiza ngawe yokudlela ruble 220 nje (180 amagremu), kanye dessert "velvet Red" izobiza ruble 10 ngaphezulu. By the way, ungase futhi zama ushokoledi flan nge ice cream, okulungiselelwe iresiphi ekhaya ngoba ruble 220., Cloudberry ikhekhe, ushokoledi esimhlophe vanilla sauce for ruble 210 futhi "Napoleon" I-ruble 150.
Kuyathakazelisa, futhi baye bazama ngempela ushokoledi okumnandi futhi nut ikhekhe ngoba ruble 160, ushokoledi amakhekhe ne okhamiwe wahlanganiswa amagonandoda ngoba ruble 190. noma strudel egqinsiwe ne apula, amagilebhisi omisiwe kanye vanilla sauce for ruble 190.? Uma kunjalo, zizwe ukhululekile ukuya yokudlela "Vereshchagin" (Vologda). Lapha, ongazithanda!
Njengoba usuyitadishile izibuyekezo "Vereshchagin" yokudlela, akunakwenzeka ukuba bathethelele ngokuningiliziwe kuka amakhasimende anelisekile futhi lokho udumazeke. Ngokushesha kufanele kuphawulwe ukuthi iningi amazwana namanje omuhle. amakhasimende amaningi ujabulele eliphezulu ekuhlinzekeni lomsebenzi, amanani ngempela kunengqondo, zizwakale kahle ukudla. Izivakashi izindawo ukushiya okubuyayo ngenhlangano ezinhle abasebenzi. Ngaphezu kwalokho, cishe zonke amakhasimende owayengifundela lapha amadili wanika amazwi omuhle kuphela ekuphathweni kanye namasistimu okusebenza abasebenzi.
Ngokuvamile, "Vereshchagin" yokudlela - indawo ephelele bazijabulise, ukujabulela okumnandi futhi bajabulele ukuphila!
Indawo yokudlela "Sevgilim" - ucezu Baku maphakathi eMoscow
Kuyini impilo. Izinhlobo empilweni yomuntu
Kungenzeka yini ukuba ikhofi abakhulelwe